WEBSITE MPISOLOVAVA ONLINE
Ny habaka dia azo zaraina ho fizarana efatra.
Ny fizarana voalohany dia antsoina hoe»Asa ho an’ny olom-pirenena»ary manome tolotra ara-pitsarana sy ara-dalàna vaovao izay ho liana voalohany indrindra amin’ireo olom-pirenena tsotra. Izany dia ahitana ny torohevitra araka ny lalàna, ny valin ny fanontaniana ao amin’ny faritra isan-karazany ny lalàna, ny asa fanaovana ny filazana sy ny fanambarana, ary koa ilaina ara-dalàna ny soso-kevitra sy toro-hevitra.
Ity fizarana ity dia ho liana ny olom-pirenena rehetra izay mila torohevitra araka ny lalàna na araka ny lalàna fanampiana. Asa sy toro-hevitra no omena momba ny amin’izao fotoana izao ny lalàna.
Indrindra fa ity fizarana ity dia tokony homarihina»mpisolovava Directory», izay afaka mahita ny tsara mpisolovava akaiky ny toerana honenana, sy ny fampiofanana»ny Tenany mpisolovava», izay ianao dia ho afaka mampiasa ny saro sy ny tsy fahalavorariany ny lalàna ao amin’ny famindram-po.
Ao amin’ny fizarana faharoa mitondra ny lohateny hoe»Asa ho an’ny raharaham-barotra»aseho amin’ny alalan’ny ara-dalàna ny tolotra sy ny vaovao izay ho manan-danja ho an’ny kely sy ny antonony orinasa.
Satria misy ara-dalàna ny fitaovana sy ny toro-hevitra momba ny raharaham-barotra, ho amin’ny tombontsoa tsy ho mpandraharaha, fa ny mpiasa sy ny orinasa
Koa ho hitanao eto ny maimaim-poana ny raharaham-barotra boky, ny fifanarahana sy ireo antontan-taratasy ilaina.
«Asa ho an’ny mpisolovava»no lohatenin’ny fizarana fahatelo.
Misy be dia be ny vaovao fa ho ilaina ho an’ny fampiharana ny mpisolovava, sy ireo izay ihany no nianatra lalàna
Eto dia afaka mahita ny ara-dalàna lahatsoratra, fanadihadiana ara-dalàna, ara-dalàna rakibolana, ny fitsarana ny fanapahan-kevitra, afaka maka sy mamaky boky sy ny lalàna ny boky sy ny mari-pamantarana rehetra. Eto dia afaka ihany koa ny hahazo ny mailaka sy ny namany sary.
Ao amin’ny fizarana fahefatra, mitondra ny lohateny hoe»Miscellaneous»misy vaovao isan-karazany fa na dia tsy mifandray mivantana amin-pitsarana, na izany aza, dia mety ho mahasoa sy mahaliana anao. Ireto ny pejy natokana hanentanana amin’ny newsletters ny toerana, ny toetr’andro, ny fivoriana ny Parlemanta, ny vaovao, ny ara-dalàna forum, sy ny toy izanyD